Global Voices teny Malagasy » Misaona An’ilay “Renibe” Nancy Hatch Dupree, Maty Teo Amin’ny Faha-90 Taonany i Afghanistana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Septambra 2017 6:25 GMT 1	 · Mpanoratra Ezzatullah Mehrdad Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Na dia tamin'ny faha-90 taonany aza, mbola nifantoka tamin'ny fitantanana sy fikarakarana ny Afghanistan Center Kabul University (ACKU) misy ireo antontan-taratasy Afgàna 60.000 i Nancy Dupree. Nanoratra torolalana dimy  momba an'i Afghanistan izy, ary namoy ny ainy taorian'ny tolona naharitra ela  tamin'ny aretin'ny fo, ny voa ary ny havokavoka tao amin'ny hopitaly iray tao an-tanànany.
Andro vitsy taorian'ny nahafatesany, nanatrika ny lanonana fanomezana voninahitra azy, sy nankasitraka ny lova navelany ireo manampahefam-panjakana Afgàna miaraka amin'ireo diplaomaty vahiny, mpiara-miasa sy namana tao amin'ny Afghanistan Center Kabul University nanaovana  ny lanonana.
Nanangona  boky sarobidy marobe, sarintany, sary tamin'ny vanim-potoanan'ny ady sy fandraketana vitsivitsy misy ny mozika malaza tao amin'ny ACKU izay toerana nonenany ihany koa izy. Ankehitriny, tsy misy miasa intsony ny birao niasany, saingy nomem-boninahitra.
Biraon'i #Nancydupree  ao amin'ny ACKU, ora vitsy taorian'ny nahafatesany
Nampahatsiahy ny fandravana nataon'ny Taliban tamin'ny sarivongana  Buddha, Bamiyan izay nampitomany an'i Dupree ny mpisera Twitter iray hafa.
Tonga tao Afghanistan amin'ny maha vadina Diplaomaty Amerikana tamin'ny taona 1962  i Dupree. Teraka sy lehibe tany India, nahazo mari-pahaizana tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tao Mexico City i Dupree ary nianatra tao amin'ny Kolejy Barnard sy ny Oniversiten'i Columbia, nianatra ny tantara Sinoa.
Raha nalefa tany Afghanistan ny tafika Sovietika tamin'ny taona 1979, voatery nandao ny firenena ry Duprees . Nogadraina nandritra ny fotoana fohy i Louis raha niampanga azy ho mpitsikilon'ny CIA ny governemanta komonista.
Matin'ny homamiadana tamin'ny taona 1989  i Louis Dupree, tamin'ny fotoana indrindra nialan'ny Sovietika tao Afganistana, saingy nanohy ny fomba fijeriny i Nancy. Niandry ny ady an-trano sy ny fibodoan'ny Taliban an'i Pakistana, niezaka nitazona ny lovan-tsofin'i Afghana tamin'ny alàlan'ny fanangonana fifandraisana tamin'ireo manampahefana Talibana azoazo izy, na dia tsy nahitam-bokany lehibe aza izany. 
Tranobe vita amin'ny marbra, vato ary sedera Afghana, nanjary seranan-tsambo azo antoka ho azy ny Afghanistan Center Kabul University . Ao no misy ireo boky, sary, sarintany sy antontan-taratasiny tsy fahita firy nangonin'izy sy Louis ary natao nomerika mba hahafahan'ireo oniversite hafa any an-tanàn-dehibe tahaka an'i Herat, Kandahar, Jalalabad, ary Mazer-e-Sharif miditra amin'izany.
“Iray amin'ireo ifantohantsika ny hampiroborobo ny hevi-dehibe rehetra sy ny fomba fanao amin'ny fanaovana fikarohana marina,” Hoy i Dupree tamin'ny the Guardian  tamin'ny taona 2013.
Nametraka ny Louis sy Nancy Hatch Dupree Foundation  ihany koa izy, izay mikendry ny hampiroborobo ny tantara sy ny kolontsaina ao Afghanistan.
Nandritra ny resadresaka nifanaovany tamin'ny Washington post , nanazava ny antony manosika ny fikambanany hitolona amin'ny fanamafisana ny vakoka Afghan izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/23/107664/
 torolalana dimy: http://www.nytimes.com/2002/07/09/theater/love-affair-with-afghanistan-continues-74-her-guidebook-inspired-play-she-fights.html
 namoy ny ainy taorian'ny tolona naharitra ela: http://www.latimes.com/local/obituaries/la-me-nancy-hatch-dupree-20170911-story.html
 sarivongana : http://www.nytimes.com/2001/03/04/world/over-world-protests-taliban-are-destroying-ancient-buddhas.html
 Tonga tao Afghanistan amin'ny maha vadina Diplaomaty Amerikana tamin'ny taona 1962: https://www.washingtonpost.com/world/nancy-hatch-dupree-an-american-icon-in-kabul-dies/2017/09/10/81d52982-9619-11e7-b569-3360011663b4_story.html?utm_term=.26248fec7b2d
 voatery nandao ny firenena ry Duprees: http://www.tolonews.com/afghanistan/renowned-historian-nancy-dupree-has-died-kabul
 Matin'ny homamiadana tamin'ny taona 1989 : http://www.nytimes.com/1989/03/23/obituaries/louis-dupree-63-anthropologist-and-expert-on-afghanistan-dies.html
 fanangonana fifandraisana tamin'ireo manampahefana Talibana azoazo izy, na dia tsy nahitam-bokany lehibe aza izany.: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/for-50-years-one-americans-life-has-traced-afghanistans--bin-laden-and-all/2015/02/08/cd4b3094-aafa-11e4-ad71-7b9eba0f87d6_story.html?utm_term=.c2ac1394f7a5